Sony Pictures မှထုတ်လုပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အရင်းအမြစ်များကို Avid S6 နှင့်ရောနှောအောင်လုပ်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Avid S6 နှင့်အတူအရင်းအမြစ်များရောစပ် Sony Pictures Post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများမြှင့်တင်ရန်
Avid S6 နှင့်အတူအရင်းအမြစ်များရောစပ် Sony Pictures Post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများမြှင့်တင်ရန်
22-ခြေလျင် State-Of-The-Art ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်ရောမွှေဖို့အသုံးပြုသည်အန်တိုနီ Quinn ပြဇာတ်ရုံမှဆက်ပြောသည်မှာ "ကိုင်းအခက်ချိုးသည့်အခါ။ "
ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအသံသည်၎င်း၏အရင်းအမြစ်များကိုချဲ့ထွင်ရန် CULVER CITY, CALIF.- တည်မြဲ, Sony က ရုပ်ပုံများ Post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများအနေနဲ့ installed ထားပါတယ် လွန်စွာလိုလားသော ယင်း၏ 6-ထိုင်ခုံအန်သိုနီ Quinn ပြဇာတ်ရုံထဲမှာ S158 ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်။ အကြီးဆုံး လွန်စွာလိုလားသော S6 console ကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုယနေ့အထိ installed, အ 22 ပေရှည်လျားဘုတ်အဖွဲ့ 48 မီတာ display တွေနှင့်အတူနှစ်ဦးကိုပုဒ်မတစ်ခုချင်းစီအတွက် 12 faders, dual-Joystick နှစ်ယောက်ဘက်လိုက်မှုပြားနှစ်စုံပါရှိပါတယ်။ ဒါဟာလေး Pro ကို Tools များ HDX2 ကစားသမားနှစ်ယောက် HDX အသံဖမျးကထောက်ခံသည်။ အဆိုပါ console ကိုပုအပေါ်အယ်ဒီတာအဖွဲ့ခန်းနှင့်အခြားအဆောက်အဦမှမြန်နှုန်းမြင့် Ethernet ကနေတစ်ဆင့်ချိတ်ဆက် Sony က အများကြီး။
တို့ကမိတ်ဆက် လွန်စွာလိုလားသော ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအဆိုပါ S6 အသစ်တစ်ခု modular ဒီဇိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ICON နှင့်စနစ်5စနစ်များကိုအကောင်းဆုံး features တွေပေါင်းစပ်သည်။ "ဒီ S6 ဟာအလွန်အစွမ်းထက်နှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုစနစ်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုဆိုပါတယ် Sony က ရုပ်ပုံများ Post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများအလုပ်အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဌတွမ်ဆက်မက်ကာသီ။ "ဒါဟာရောနှောပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်နဲ့ fluidly အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ကြောင့်အသံနှင့်ဖန်တီးမှုအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်သဲရုပ်ရှင်တေးသံများတည်ဆောက်ရန်သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနုပညာရှင်တွေဒီ tool အသစ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဖို့အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်။ "
ရောနှောစတိဗ် Pederson မှတ်တမ်းတင်-Re နှင့်မှာအသံ Editor ကိုစတီဗင် Ticknor ကြီးကြပ် လွန်စွာလိုလားသော အတွက် S6 console ကို Sony က'' s ကိုအန်တိုနီ Quinn ပြဇာတ်ရုံ
အသစ် console ကို Re-မှတ်တမ်းတင်ရောနှောစတိဗ် Pederson နေဖြင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အတှကျအသုံးပွုနှင့်မျက်နှာပြင်ကျောက်မျက်ရတနာသည်းထိတ်ရင်ဖိုအဘို့အသံကရောထွေးဖို့အသံ Editor ကိုစတီဗင် Ticknor ကြီးကြပ်ခဲ့သည် အခါကိုင်းအခက် Break များ။ "ငါသည်အများဆုံးသင်သည် Pro ကို Tools များထဲတွင်ရှာတွေ့ပေမယ့်ပိုပြီးအစွမ်းထက်ကြောင်းမှတ်ဉာဏ်တည်နေရာနှင့်ပြတင်းပေါက် configurations တစ်စပ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏သော S6 ၏အပြင်အဆင် functions များ, ခဲ့ကြသည်ခံစားဘယျ" ဟုအဆိုပါအတွေ့အကြုံ Ticknor ပြန်ပြောပြသည်။ "လွန်စွာလိုလားသော ရောနှောစကားကိုနားထောင်ကာဘက်ပေါင်းစုံရောစပ်နှင့်တည်းဖြတ် tool ကိုထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ "
Pederson သောအရာကိုသူကအကောင်းဆုံး likes console ကိုဖွင့်မီတာ display ကိုထောက်ပံ့ချက်ချင်းအမြင်အာရုံတုံ့ပြန်ချက်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ "ဒီသစ်ကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖော်စပ်ဖို့ကြှနျတေျာ့ချဉ်းကပ်ခြောတဲ့ကီးဘုတ်နဲ့မောက်နှင့်အတူအတိတ်၏တည်းဖြတ်တဲ့အခန်းရောစပ်စတိုင်လျော့နည်းဒီတော့ပိုပြီးရိုးရာအသိထဲမှာ console ကိုအပေါ်မြှောင်မှပြောင်းလဲရန်နှင့်သွားမှာပါ" ဟု Pederson ကဆိုသည်။ "လွန်စွာလိုလားသော automated အဆိုပါ Pro ကို Tools များထဲမှာရောစပ် session တစ်ခု-သေးကအစွမ်းထက်, 'retro' 'စတိုင် console ထဲကဒါပြုတော်မူပြီများ၏ထွန်းသစ်လုပ်ငန်းအသွားအလာညီတဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ဖန်တီးထားသည်။ ဒါဟာအကြီးအဖြစ်မယ့်ဖွင့်! "
အကြောင်းအရာ Sony က ရုပ်ပုံများ Entertainment က
Sony က ရုပ်ပုံများ Entertainment က (SPE) ၏လက်အောက်ခံဖြစ်ပါတယ် Sony က Entertainment က Inc ကတိုကျို-အခြေပြု၏လက်အောက်ခံ Sony က ကော်ပိုရေးရှင်း။ SPE ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားမှုရုပ်ပုံထုတ်လုပ်မှု, ရှာမှီးခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးပတ်ဝိုင်း; ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်မှု, ရှာမှီးခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူး; ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ရက်များ, ဒီဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုနှင့်ဖြန့်ဖြူး; စတူဒီယိုအဆောက်အဦ၏စစ်ဆင်ရေး; အသစ်ဖျော်ဖြေရေးထုတ်ကုန်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်နည်းပညာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။ အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်အတွက်သွားရန် www.sonypictures.com.
ကုမ္ပဏီကြေညာ post ကိုထုတ်လုပ်မှု Sony Pictures အသံက တီဗီနည်းပညာ 2015-09-25
ယခင်: အသံဖုန်းများအတွက်ဒိန်းမတ်အသံ Recordist အယ်လန် Holmberg နှင့်အတူခြေလှမ်းသိမ်းထားပြီး
နောက်တစ်ခု: ဖရန့် Zappa, စီးတီးနှလုံးအတွက် Featured Duke Ellington Portraits: 2015 လတ်ဆတ်အာရုံစိုက်